Ithegi: intengiso yenkqubo | Martech Zone
Ithegi: intengiso yenkqubo
I-DanAds: Itekhnoloji yokuThengisa ngeNkonzo yokuZipapasha yaBapapashi
NgoLwesihlanu, Matshi 5, 2021 NgoLwesihlanu, Matshi 5, 2021 Peo Persson
Inkqubo yentengiso (ukuzenzekelayo kokuthenga nokuthengisa intengiso kwi-Intanethi) ibisisiseko kubathengisi banamhlanje iminyaka emininzi kwaye kulula ukubona ukuba kutheni. Isakhono sabathengi beendaba sokusebenzisa isoftware ukuthenga intengiso siguqule indawo yentengiso yedijithali, sisusa isidingo senkqubo yesiko yezandla ezinje ngezicelo zezindululo, iithenda, iikowuti, kwaye, ikakhulu, uthethathethwano lwabantu. Inkqubo yentengiso yesiko, okanye inkqubo yolawulo lwentengiso njengoko ngamanye amaxesha kubhekiswa kuko,
Enye yemixholo eqhubekayo endiyivayo ngenkqubela phambili kwitekhnoloji kukuba iya kubeka imisebenzi emngciphekweni. Ngelixa kunokuba yinyani phakathi kwamanye amashishini, andithandabuzi ukuba iya kuba nefuthe ekuthengiseni. Abarhwebi boyisiwe ngoku ngoku njengoko inani lamajelo kunye namajelo eqhubeka nokwanda ngelixa izixhobo zentengiso zihlala zimile. Itekhnoloji inika ithuba lokuzenzekelayo imisebenzi ephindaphindwayo okanye yesandla, ibonelela abathengisi ngexesha elininzi